720000 ~ 1080000 Kyats
High-Performance Oil Remover ● Inlet pressure：0.2 ~ 1.0Mpa ● Inlet temperature：≤5℃ ~ 80℃ ● Initial pressure drop：≤0.005Mpa ● Filter route：5μm ● Water removal rate：≥99% ● Outlet air oil content：≤0.01ppm ဂျာမဏီနိုင်ငံထုတ် Oil Remover အမျိုးအစားဖြစ်ပြီ စံချိန်စံညွှန်းမီပြည့်မှီစွာ ထုတ်လုပ်ထားသည့် အတွက် သုံးစွဲသူတိုင်း စိတ်ချမ်းသာစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ DENAIR Brand ကိုဝယ်ယူအားပေး လိုပါက ကျွန်တော်တို KGS Myanmar ကို ဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါသည်။
The machine is designed for setting the right and left direction of band blade teeth. This will increases chip removing rate, effectively reducing cutting drag, while increasing cutting efficiency. Suitable for H.S.S band blade. Manual operation by handwheel. Suitable for various teeth pitches. Simplified construction. Minimum trouble. Easy to operate at low price.
ကားများအတွက် အရမ်းအသုံးဝင်မယ့် သယ်ဆောင်၍ လွယ်ကူသော ကားလေထိုးစက်အသေးလေးကို Rocket တွင် ရရှိနိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ Cigarette Lighter အပေါက်နဲ. အသုံးပြုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုးက ၇ပေ ခွဲ ရှည်ပါတယ်။ နောက်ဘီးအထိ မှီမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားဘီးများ သာမက တခြား ပုံစံတူများကိုလည်း လွယ်ကူစွာ လေထိုးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်နိုင်ပြီး အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်မယ့် ကားလေထိုးစက် အသေးကို Rocket တွင် ဖုန်းဆက် မှာယူလိုက်ပါ။ 09264686461 ဈေးနှုန်း - 19000 (Delivery free in Yangon) မြန်မာနိုင်ငံမြို.ကြီးများ အိမ်အရောက်ပို.ခ - ၃ထောင် တခြားမြို.များကိုတော့ ပိုက်ဆံလွဲပြီး ၄၈နာရီအတွင်း ကားဂိတ်အထိ ပို.ဆောင် ပေးနေပါပြီ။ ဝယ်ယူလိုပါက 09264686461 (Male Operator) 09784419691 (Female Operator) 09961127000 ကိုဆက်သွယ်ပြီး မှာယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက်သည့် Social Media တစ်ခုခုကို အသုံးပြု၍ Rocket တွင် Order တင်နိုင်ပါပြီ။ 09264686461 ကို သူငယ်ချင်းအဖြင့် contact တွင် save ထားလိုက်ပါ။ Messenger / Viber / Line / WeChat / Bee Talk / Whatup / Tango / MyChat / DMM(ဒို.မြန်မာ) ဒုံးပျံကဲ့သို့ အရှိန်နဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်ပေးမယ့် Rocket...